Kurapa kwekunyora, kubatsirwa kwepfungwa dzedu | Zvazvino Zvinyorwa
Pamwe pane imwe nguva wakambonzwa kuti wave kuda kuputika. Mutoro kana kusuruvara zvinotitadzisa kuenderera nezuva redu zuva nezuva.
Kufumura pfungwa dzedu papepa inogona kuve nzira inoshanda uye ine hutano yekubvisa iyo yakaipa mifungo.
Pane dzakawanda nguva isu tinopfuura nepanhanho umo isu tinonzwa takasuruvara kana kusava nehanya uye isu hatizosvika pakuziva chikonzero chekunzwa ikoko kunotipinda. Dzimwe nguva zvinonetsa kuendesa ese iwo manzwiro. Angave kutsamwa, kusuruvara, kushushikana kana chero kumwe kunzwa uko kunotikomberedza, kunyora nezvazvo inzira yekurapa pfungwa uye nekuisa pfungwa dzedu munzira.
1 Chii chinonzi kurapa kunyora?
2 Nzira dzekuvandudza uye mabhenefiti avo
2.3 -Pfuura iyo duel:
2.4 -Chengetedza mufaro wako!
Chii chinonzi kurapa kunyora?
Kurapa kwekunyora inosanganisira kuratidzira ese asina kunaka manzwiro anoita kuti tinzwe kushata. Zvichida nekuti zvinonetsa kuti iwe uvhure kune mumwe munhu kana kutaura zvaunonzwa kana nekuti haudi kutsanangura zvaunonzwa, kurapwa uku kuchakubatsira.
Tora kabhuku, pepa, pepkin, komputa kana chero chaunogona kunyora uye ubudise chero chiri kukudya mukati. Ingo nyora.
Nzira dzekuvandudza uye mabhenefiti avo
Hatisi vatsvene. Hapana. Pamwe uye kunyangwe zvikaitika netsaona takakuvadza mumwe munhu. Uye zvechokwadi izvo zvinopesana. Kunyora tsamba yekukumbira ruregerero, kunyangwe tikasaitumira, zvinogona kutiita kuti tinzwe zvirinani. Unofanirwa kushinga uye kuperera. Funga izvozvo izvo zvaunonyora ndezvako chete, saka usatya. Kana iwe usina kutendeseka newe, kurapwa hakuna zvakunobatsira.
Kana mune iyo poindi yapfuura takataura nezvekuzvikanganwira pachedu, isu zvakare tine mukana wekudzidza kuregerera vamwe. Kana mumwe munhu akatikuvadza, akapira mitsara mishoma nezvose zvaunofunga nezvemaonero avo uye nemanzwiro ako, zvinobatsira kutaura. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchipo.
-Pfuura iyo duel:
Isu tinowanzobatanidza izwi rekuti "kuchema" nerufu rwemudiwa. Nehunyanzvi, kushungurudzika inzira yekugadzirisa mafungiro kune chero kurasikirwa. Kunyangwe, sekutaura kwatakaita, kufa, mudiwa, basa kana chero chimwe chinhu chaive chakakosha muhupenyu hwedu. Kunyora nezve manzwiro atora pamusoro pedu pfungwa kuchatibatsira kudzikamisa kushushikana kwedu. Nyora papepa zvese zvaungataure kune wawakamboshanda naye, mukuru akakudzinga kana bhangi. Iwe uchaona kusaziva kwauchatanga nekutendeuka pamusoro pekutambudzika kana kutsamwa uyezve kusava nehanya nemunhu iyeye kuchasvika. Zviite sezvaungareva iwe pachako uye, kana uchida, bvarura kuita zvidimbu.
Kana zvinosuruvarisa isu tichireva kune akakosha kurasikirwa kwemunhu, ingozvisiya iwe uende.
-Chengetedza mufaro wako!
Hatifanire kusara nevakaipa chete. Kana iwe kazhinji uine yakaipa streak, usapotsa rimwe chete zuva rakanaka. Nzira yakanaka ndeyekuchengetedza diary yemafungiro akanaka nemazuva.. Dururira maari mufaro wese wawakanzwa muzuva kana nguva iyoyo. Zuva ratinoda kusundirwa nekuti zvese zvine makore, tinotora kabhuku uye kuverenga zvakare zvaakanyora. Iko hakuna chakaipa icho chingangodaro makore zana.
Iko kusaziva kwakasimba kwazvo. Dzimwe nguva unofanirwa kusimuka kuti umubvunze kuti sei achitamba nesu nenzira iyi. Nyora kwaari, nyora iwe pachako, nyora kumunhu iyeye kana kune hupenyu hwakafanana hwakakutamba iwe uye umuregedze aende. Izvo zvakanaka? Izvo hazvidi kuti uve wekunyora kutsemuka, iwe unongofanirwa kurega mazwi abude ega.
Icho chiitiko chenguva yekunyora chinobatsira kuisa pfungwa dzako muhurongwa. Inoita kuti pfungwa dzedu dzishande, zvinoita kuti tinzwisise zvinhu zvatisina kunzwisisa kana zvatisingazive kuti zvaivepo. Kunyora inokurudzira ndangariro yedu uyezve kufunga kwedu.
Uye ndiani anoziva ... pamwe rimwe zuva zvese zvawakanyora zvichabatsira mumwe munhu kukunda matambudziko avo kana kutya. Saka ikozvino iwe unoziva kunyora!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Kurapa kwekunyora, kubatsirwa kwepfungwa dzedu
Ziva webhu iyo inofungidzira bhuku raungade